ZISUSA NJANI IIMPUKANE NGAPHAKATHI NANGAPHANDLE KWENDLU YAKHO - UBOMI
Ungazisusa njani iimpukane ngaphakathi nangaphandle kwendlu yakho, ngokweengcali zezinambuzane
Ukujonga ukubhabha okungahleliwe ekhayeni lakho kuyinto eqhelekileyo. Kodwa xa ngequbuliso uqala ukubona izitshabalalisi ezitshisayo naphi na , lixesha lokuba uthathe inyathelo.
Ngokobuchwephesha, iimpukane zinokuzalela ngaphakathi kwekhaya lakho, kodwa amathuba okuba aphakame kakhulu kangangokuba avela ngaphandle, utshilo ugqirha wezilwanyana URoberto M. Pereira, Ph.D. , isazinzulu sophando ngezinambuzane kwiYunivesithi yaseFlorida. Eyona nto iqhelekileyo, iimpukane ziya kungena ngefestile eziqhekekileyo kunye neengcango ezivulekileyo, kwaye ziyathanda ukuhlala zingqonge i-mulch piles (ezizalela kuyo) okanye iinkonkxa zenkunkuma ezigcinwe kufutshane nendawo zokungena.
Ubundlobongela bezilwanyana nako kunokuba ngumcimbi, utsho u-entomologist uNancy Troyano, Ph.D., uMlawuli wezoLawulo lwezeMfundo noQeqesho Ulawulo lwezinambuzane ze-Ehrlich . Iimpukane ngaphandle zizalela kwinkunkuma ebolileyo, enjengelindle okanye inyama ebolayo, utshilo. Ukuba kukho indawo ezinokuzalela kuyo ezi zinambuzane, ziya kuqhubeka zibuya. Izinga lokuzala kweempukane liphezulu kakhulu kwaye umntu obhinqileyo omdala angabeka amakhulu amaqanda athi akhule abe ngabantu abadala kwiintsuku nje ezisixhenxe.
Ungazilahla njani iimpukane ngaphakathi kwekhaya lakho
umfanekiso wefotoImifanekiso kaGetty
UTroyano uthi ufuna ukuthintela iimpukane ukuba zingene ekhayeni lakho kwasekuqaleni, ngoko ke kubalulekile ukugcina iingcango kunye neefestile zivaliwe xa kunokwenzeka, ugubungele ukutya, ususe inkunkuma yokutya, kwaye ugcine inkunkuma kwiziciko ezivaliweyo.
UKUYA iswiti kunokuba luncedo ekubambiseni iimpukane ezingahleliwe kodwa kukho iindlela ezimbalwa zokunyanga ekhaya onokuzama ukuzibamba ngaxeshanye, utshilo uPereira.
Hlanganisa iapile cider iviniga kunye nesepha yesitya .
Hlanganisa iindawo ezilinganayo ezimbini kwisitya esincinci kwaye ungeze i-pinch yeshukela kumxube. Ngokufanelekileyo, isepha yesitya iya kuba nevumba elineziqhamo. Ivumba elibiweyo elivela kwiviniga linokutsala iimpukane, utshilo uPereira. Kodwa isepha yeyona nto iya kubabulala. Isithambisi kwisepha siyakutshabalalisa iimpukane zetyise iimpukane kwaye zinokudiliza neeseli zazo, utshilo.
Iipakethe ezingama-20 ezipakishwe ngamacala amabini amthubiUGidaliya amazon.com$ 8.99 ngexabiso THENGA NGOKU
✔Zama iphepha lokubhabha.
Oku yi isiqwenga sephepha ukuba ungadibanisa ngokulula uphahla lwophahla okanye naphi na apho iimpukane zixhomekeke khona. Xa iimpukane (okanye ezinye izinambuzane ezinamaphiko) ziyayijonga, ziyabambelela ephepheni.
Kwangokunjalo, ungabeka ioyile ye-eucalyptus kwimicu yamaphepha axhonyiweyo- yithi, kufutshane nefestile- ukuwagxotha, njengoko iimpukane zingalithandi ivumba, utshilo uFrank Meek, uMphathi weeNkonzo zobuGcisa IiRollins . Oku kuya kubagxotha kuphela, kodwa kungababulali.
Yenza ibhotile yesoda.
Thatha ibhotile yeplastiki engenanto kwaye unqumle isithathu sayo esiphezulu. Beka amanzi aneswekile kwisithathu esisezantsi emva koko ubeke iqhekeza lakho elisikiweyo ngaphezulu, kodwa lijike lijongise ezantsi ukuze umphezulu webhotile ujonge kulwelo. Ngale ndlela, udala uhlobo lwefaneli. Iimpukane ziya kusebenza zibhotile, kodwa azizukukwazi ukubuyela ngaphandle, utshilo uRollins.
Ungazisusa njani iimpukane ngaphandle kwekhaya lakho
Ngenxa yokuba uninzi lweempukane zingena ekhaya lakho zivela ngaphandle, uPereira ucebisa ukuba wenze utshintsho kwipropathi yakho ejikelezileyo.
Shenxisa iimfumba ze mulch kude nendlu yakho .
Iimpukane ziya kuzalela kuzo, utshilo uPereira. Ukuba awunaso isithuba sokusebenza, zama okungenani ukugcina imfumba kude neengcango kunye neefestile.
Gcina iitoti zenkunkuma zitywinwe kakuhle.
Iimpukane zitsaleleka kwivumba lezinto ezibilisiweyo nezibolileyo, yiyo loo nto ziziinkunkuma ngokukodwa. Ukugcina iitoti zakho zitywiniwe kwaye kude neendawo zokungena kufuneka kuncede, utshilo uRollins.
Coca emva kwezilwanyana zasekhaya.
Ayipheleli ekubeni lilindle kuphela indawo yokuzalela iimpukane, banokuhlala apho ngaphambi kokufika kukutya kwakho, utshilo uTroyano.
Spine ingca yakho kunye nezityalo.
Ezinye izityalo, njenge-basil, i-lavender, kunye ne-mint ngenene ukunceda ukugxotha iimpukane kunye nezinye izinambuzane , Utsho uTroyano. Kwakhona, abalithandi nje ivumba.
Nini ukubiza umpro malunga nengxaki yakho yokubhabha
Ngaphandle kokuba unesifo seempukane endlwini yakho (nto leyo enqabileyo kakhulu), uPereira uthi kubalulekile ukwenza ulawulo lokubhabha ngaphandle kwekhaya lakho kwaye emva koko wenze konke okusemandleni ukubenza bangadada ngendlela yabo ngaphakathi.
Kodwa ukuba uziva ngathi uhlala ubona iimpukane, ziyasokolisa kakhulu, kwaye amayeza asekhaya awasebenzi, isenokuba lixesha lokuba ubize umntu oza kubulala.
Ithetha ntoni i-444?